I-South Coast Mountain Views Village Escape - I-Airbnb
I-South Coast Mountain Views Village Escape
Cambewarra, New South Wales, i-Australia
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Mez
Indlu yethu yezivakashi enokuthula etholakala edolobhaneni elithulile lase-Cambewarra inakho konke okudingayo ohambweni lwakho lwase-South Coast. Iyunithi iza ne-AC, indawo yokupaka yamahhala, ne-TV. Phakathi nokuhlala kwakho, ungabuye ujabulele ukusebenzisa indlu yokugezela yangasese, igumbi lokuphumula, nekhishi elincane. I-Airbnb yethu iphakathi kwebanga lokushayela ukuya ezindaweni zokudlela eziningana ezidumile, amapaki kazwelonke, namabhishi. Indawo ekahle kakhulu yokuhlola i-South Coast enhle.
I-guesthouse yethu iyisizinda esihle kunoma ubani ofuna ukuhlola isifunda sase-Shoalhaven. Ngokubukwa okuhle kwezintaba kanye nompheme wezivakashi wangasese, ababungazi bethu be-Airbnb bayindawo ekahle yokuphumula nokungcebeleka edolobhaneni lase-South Coast lase-Cambewarra.
I-studio sinezici zikanokusho ezifana nendawo yaphansi yegumbi lokugezela efudunyeziwe, i-air-conditioning kanye nombhede we-queen wekhwalithi ofakwe izingubo zikagesi ngobusuku obubandayo. Ikhishi elincane lesimanje liza nezinto ezimbalwa ezibalulekile zesidlo sasekuseni esinefriji nendawo yokugcina ukudla etholakalayo yezinto zakho.
4.98 · 50 okushiwo abanye
I-Cambewarra yidolobhana elinokuthula elisezansi kwe-Cambewarra Mountain emangalisayo. Idolobhana lithule kakhulu futhi kulula ukuhambahamba ngezinyawo eziningi ezitholakala kalula ukuya emigwaqweni yezwe.
Hlola ezinye izinketho ezise- Cambewarra namaphethelo